Umshini obizwa ngokuthi yi-automatic labeling umshini wokurekhoda ikhanda, ngokuvamile obizwa ngokuthi izinga eliphakeme lemishini yokufaka amalebula ezenzakalelayo, ikakhulukazi ukulawulwa kwe-servo (PLC), izinhlaka ezahlukahlukene ezisebenzayo nomshini wokulebula okuzenzakalelayo sewenziwe ngcono.
(1) Umshini wokubhalwa kwama-semi-automatic ngokuvamile wamukela uhlelo (lokungena) lokulawula ikhanda lokulebuli, futhi ijubane lokulebula yizicucu ezingama-20-45 ngomzuzu. Umshini wokulebula okuzenzakalelayo ulawulwa uhlelo (i-servo) ngejubane lezinto ezingama-40-200 ngomzuzu. Ukusebenza okuhlukile, isivuno sehlukile ngokwemvelo.
(2) Inqubo yomshini wokurekhoda ongamakhompyutha we-semi-othomathikhi ngokuvamile udinga ukwenziwa ngemikhiqizo ephathwe ngesandla, enobubanzi obukhulu bephutha nobunzima ekuphathweni kweqiniso. Futhi umshini wokufaka ilebula othomathikhi wamukela ukulebula okumisiwe kwamapayipi, indawo yokuhlukanisa okuzenzakalelayo, ukubala ukunemba kwe-1mm.
(3) Iningi lomshini wokurekhoda ongamakhompyutha we-semi-othomathikhi, imikhiqizo yokulebula inomkhawulo, ngaphandle kwezingxenye ezikhethekile zingasetshenziswa kuphela emshinini owodwa, ngakho-ke isetshenziswa ikakhulukazi kubakhiqizi abancane bewebhusayithi. Umshini wokulebula okuzenzakalelayo wehlukile, imishini inemisebenzi eminingi, engasetshenziswa ekubekweni okuhlukahlukene nosayizi wemikhiqizo embonini efanayo, futhi ilele ezikhundleni ezihlukile.
Idivaysi inekhanda elinelebula elembayo, elingashintshanisa amalebula ngokushintshana ngama-ax, ama-X, Y no-Z. Uma kufakwa ilebuli, ibhande lokudlulisa lokufakelwa kwentambo yokukhiqiza yokufaka isetshenziswa njengetafula elisebenzayo, futhi imikhiqizo efikisiwe ilebulwa yisikhundla sokuthola iso laso ngokuqondile. Ukunemba ngu-mm 1 mm. Imishini inomsebenzi wokungabhali ilebuli nokulinganisa okuzenzakalelayo ngaphandle kokulebula.
Ngokuvamile, ukulebula imishini ye-manipulator kunganamathela emikhiqizweni ehlukahlukene yendiza, i-arc nezinye izikhundla. Ezinye izikhundla zokubhala kwelebuli lekhanda zingashintshwa ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, futhi imishini ehambisanayo ingangezwa futhi ihlanganiswe ukufeza ukulebula okuhlukile kokusebenza.